Akụkọ Bible: Ihe Mere Mozis Ji Gbaa Ọsọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE Mozis ka o si n’Ijipt na-agbapụ. Ị̀ hụrụ ndị ikom na-achụ ya? Ị̀ ma ihe mere ha ji chọọ igbu Mozis? Ka anyị lee ma ànyị pụrụ ịchọpụta.
Mozis tolitere n’ụlọ Fero, bụ́ onye na-achị Ijipt. Ọ ghọrọ nwoke maara ihe na onye ukwu. Mozis maara na ya abụghị onye Ijipt, kama na ndị mụrụ ya n’ezie bụ ndị Izrel, ndị bụ́ ndị ohu.
Otu ụbọchị, mgbe ọ gbara afọ iri anọ, Mozis kpebiri ije hụ otú ndị ya na-eme. Ụzọ e si emeso ha jọgburu onwe ya. Ọ hụrụ onye Ijipt nke na-eti onye Izrel bụ́ ohu ihe. Mozis legharịrị anya, ma mgbe ọ na-adịghị onye ọ bụla ọ hụrụ na-ele ya, o tiri onye Ijipt ahụ ihe, onye Ijipt ahụ wee nwụọ. Mozis wee zoo ozu ya n’ime ájá.
N’echi ya, Mozis jere ịhụ ndị ya ọzọ. O chere na ya pụrụ inyere ha aka ka ha ghara ịbụ ohu ọzọ. Ma ọ hụrụ ka ndị ikom Izrel abụọ na-alụ ọgụ, Mozis wee sị onye nke mejọrọ ibe ya: ‘N’ihi gịnị ka ị na-eti nwanna gị ihe?’
Nwoke ahụ sịrị ya: ‘Ònye mere gị onyeisi na onyeikpe anyị? Ị̀ chọrọ igbu m dị ka i gburu onye Ijipt ahụ?’
Ụjọ bịara Mozis. Ọ matara na ndị mmadụ amarawo ihe ya mere onye Ijipt ahụ. Ọbụna Fero anụwo ya, o wee zipụ ndị ikom ka ha gbuo Mozis. Ọ bụ nke a mere Mozis ji si n’Ijipt na-agbapụ.
Mgbe Mozis hapụrụ Ijipt, o jere n’ala Midian nke dị ezigbo anya. Ọ hụrụ ezinụlọ Jetro n’ebe ahụ, o wee lụrụ otu n’ime ụmụ ya ndị nwaanyị nke aha ya bụ Zipora. Mozis ghọrọ onye na-azụ atụrụ ma na-elekọta atụrụ Jetro. O biri n’ala Midian ruo afọ iri anọ. Mozis agbaala afọ iri asatọ ugbu a. Otu ụbọchị, ka Mozis na-elekọta atụrụ Jetro, otu ihe dị ịtụnanya mere nke gbanwere ndụ Mozis kpamkpam. Ka anyị hụ ihe bụ́ ihe ịtụnanya ahụ.
Ọpụpụ 2:11-25; Ọrụ 7:22-29.
Ebee ka Mozis nọ too, gịnịkwa ka ọ maara banyere ndị mụrụ ya?
Gịnị ka Mozis mere mgbe ọ dị afọ iri anọ?
Gịnị ka Mozis gwara onye Izrel nke na-alụ ọgụ, gịnịkwa ka nwoke ahụ zara ya?
N’ihi gịnị ka Mozis ji si n’Ijipt gbapụ?
Ebee ka Mozis gbagara, ònyekwa ka o zutere n’ebe ahụ?
Gịnị ka Mozis mere n’ime afọ iri anọ sochirinụ ka o sichara n’Ijipt gbapụ?
Gụọ Ọpụpụ 2:11-25.
N’agbanyeghị ọtụtụ afọ o ji gụọ akwụkwọ iji nweta amamihe nke Ijipt, olee otú Mozis si gosipụta na ya na-eguzosi ike n’ihe nye Jehova na ndị ya? (Ọpụ. 2:11, 12; Hib. 11:24)
Gụọ Ọrụ 7:22-29.
Gịnị ka anyị pụrụ ịmụta site ná mgbalị Mozis mere iji aka ya napụta ụmụ Izrel site n’agbụ Ijipt? (Ọrụ 7:23-25; 1 Pita 5:6, 10)